Akụkụ akpaaka AC Compressor - Bowente Auto Parts Co., Ltd.
E nwere ụfọdụ mkpa akpaaka ac compressor akụkụ anyị nwere ike inye nke ọma, dị kanjide magnetik, valvụ njikwa, akàrà aro, n'azụ isi, na na.
Nkeeriri electromagneticnke igwe ntụ oyi ụgbọ ala bụ ngwaọrụ nnyefe ike n'etiti injin ụgbọ ala na igwe ntụ ntụ oyi.A na-ebugharị igwe ntụ ntụ ntụ ntụ Compressor site na injin ụgbọ ala site naeriri electromagnetic.
Nkeeriri electromagneticNke ikuku ntụ oyi ụgbọ ala na-abụkarị akụkụ atọ: clutch pulley, clutch coil, na clutch hub.Aeriri electromagneticmaka igwe ntụ oyi ụgbọ ala bụ ngwaahịa injinịa na igwe eletrịkị.
Anyị na-akpakọrịtaeriri electromagneticeji maka ụgbọala compressor nke ikuku conditioner.Usoro nke ipigide gụnyere 5H, 7H, 10P, V5, CVC, DKS, FS10, MA, DLQT & SS, wdg Iji nye zuru ezu iche nke clutches n'ihi na anyị ahịa, anyị mgbe niile na-ezuru inventories.Iji nye ezigbo ọrụ maka ndị ahịa ụwa, anyị nwere usoro mmepụta ihe dị elu & siri ike, siri ike & usoro nchịkwa sayensị yana ọkachamara & usoro nyocha zuru oke.
Ụkpụrụ ọrụ nke Magnetic Clutch
Nkeeriri electromagneticnke ikuku ikuku ụgbọ ala na-achịkwa ya site na ngbanwe ikuku ikuku, thermostat, onye na-ahụ maka ikuku, mgbanaka nrụgide, wdg, iji gbanye ma ọ bụ bepụ ike nnyefe n'etiti engine na compressor mgbe ọ dị mkpa.Tụkwasị na nke ahụ, mgbe ihe mkpuchi ụgbọ ala na-ebufe ibu, ọ pụkwara ịrụ ọrụ nchebe ụfọdụ.
N'ime ha, eriri electromagnetic na-edobe na casing nke auto ac compressor, diski mbanye na-ejikọta ya na isi ogwe nke ac compressor, a na-etinyekwa pulley na mkpuchi mkpuchi nke compressor site na nkedo ma nwee ike ịtụgharị n'efu.Mgbe agbanyere ikuku ntụ oyi, ihe dị ugbu a na-agafe na eriri electromagnetic nke njigide electromagnetic, na eriri igwe electromagnetic na-ebute mmasi electromagnetic, nke na-ejikọta efere mbanye nke ac compressor na pulley, ma na-ebufe torque nke injin ahụ gaa na ya. na compressor isi aro ka bugharia compressor isi aro.Mgbe agbanyụrụ ikuku ntụ oyi, ike nke ikuku electromagnetic na-apụ n'anya, a na-ekewa efere mbanye na pulley n'okpuru ọrụ nke mpempe akwụkwọ mmiri, na compressor kwụsịrị ịrụ ọrụ.
The compressor pulley na-atụgharị mgbe niile mgbe engine na-agba ọsọ, ma compressor na-agba naanị mgbe pulley na-arụ ọrụ na compressor mbanye aro.
Mgbe usoro a na-arụ ọrụ, ugbu a ga-esi na solenoid eriri igwe.Ihe dị ugbu a na-adọta ya na efere armature.Ike ndọta siri ike na-adọta efere armature n'akụkụ ihe ndọba ụgbọala ahụ.Nke a ga-akpọchi pulley na
Efere ihe mgbochi ahụ bụ ọnụ;efere armature na-anya kọmpat.
Mgbe sistemu ahụ kwụsịrị ma kwụsị ịfefe na eriri solenoid, mmiri akwụkwọ mmiri na-ewepụ efere armature n'ebe a na-adọba ụgbọala ahụ.
Igwe ndọta anaghị atụgharị n'ihi na a na-ebufe magnetism ya na armature site na pọọlụ.The armature efere na oghere mgbakọ na-obere na compressor mbanye aro.Mgbe a na-akwọghị kọmpụta ahụ, clutch pulley na-atụgharị na agba bọọlụ nwere ahịrị abụọ.
Mmezi nke na-adịghị arụ ọrụIgwe Igwe Igwe Ọdụdọ
Mgbenjigide ikuku ikukua na-akpọ eriri igwe ọkụ, na mgbakwunye na nsogbu ndị dị mma, isi ihe kpatara ya bụ na nrụgide nke ikuku ikuku ụgbọ ala dị oke elu, na nkwụsị nke na-eme ka compressor na-agba ọsọ dị ukwuu.Ike mmịpụta elektrọnịkị nke eriri igwe elektrọnik karịrị ike mmịpụta elektrọnịkị nke eriri igwe, a na-akpọkwa ya ọkụ site na ikpo oke ọkụ.
Enwere 3 ihe kpatara oke nrụgide nke sistemu ikuku ikuku:
1. The engine na-agba ọsọ na-abaghị uru mgbe a na-adọba ụgbọala na ikuku oyi na-eji n'okpuru anyanwụ ruo ogologo oge;
2. Mgbe onye na-eme ka mmiri dị jụụ nke tank mmiri ahụ dara, a ka na-eji ihe mkpuchi ikuku mee ihe ruo ogologo oge na ike dị elu (a na-ekekọrịta onye na-ekpo ọkụ nke mmiri mmiri na-ekpo ọkụ na ikuku condenser fan);
3. Ọnụ ọgụgụ nke ikuku refrigerant agbakwunyere na usoro refrigeration karịrị akarị.
Mgbe akpaaka ac compressor na-amalite ịrụ ọrụ, ṅaa ntị na windo nlele nke tankị mmiri mmiri wee chọpụta na ọ dịghị ikuku ikuku na windo nlele.Mgbe ahụ jikọọ mita mita dị elu na nke dị ala na usoro refrigeration, lelee nrụgide ya, ma chọpụta na ma akụkụ ahụ dị elu na nke dị ala na-atụgharị.N'ụzọ doro anya, refrigerant ejubigara ókè.Mgbe e wepụrụ ego kwesịrị ekwesị nke refrigerant n'akụkụ ala dị ala (nrụgide dị n'akụkụ elu dị elu bụ 1.2-1.8MPa, na nrụgide dị n'akụkụ ala bụ 0.15-0.30MPa), a na-ewepụ mmejọ ahụ.
Iji zere ọdịda ndị dị otú ahụ, a ghaghị iji ihe mkpuchi ụgbọ ala mee ihe n'ọnọdụ 3 ndị a.
1. Mgbe ọnụọgụ nke refrigerant agbakwunyere gafere iwu ahụ, a ga-ahapụrịrị ya n'oge, ma ọ bụghị ya, a naghị ekwe ka ikuku ikuku mee ihe.Usoro ịlele ọnụọgụ nke refrigerant bụ: mgbe ụgbọ ala ac compressor na-amalite ịrụ ọrụ, lelee ma enwere egosipụta na windo nlele nke tankị nchekwa mmiri.Obere obere, a ga-agbakwunye refrigerant na ego kwesịrị ekwesị.
2. Mgbe onye na-eme ka mmiri dị jụụ nke tank mmiri ahụ kwụsịrị ma kwụsị ịgba ọsọ, a ga-akwụsị ikuku ikuku ozugbo, ma ọ bụghị ya, usoro refrigeration ga-eme ka nrụgide dị elu dị elu, nke ga-eme ka eriri electromagnetic na-agbapụ na ọkụ.
3. Mgbe ị na-adọba ụgbọala, mgbe engine na-abaghị uru, ọ ka mma ka ị ghara ịgbanye ikuku ikuku.
Otu esi edozinjide magnetik:
Nkenjide magnetikna-etinye ma na-ewepụ compressor mgbe agbanyere ma gbanyụọ ntụ oyi ụgbọ ala gị.Ozugbo ọkụ eletrik sitere na mgbanyụ ọkụ ma ọ bụ gbanyụọ na-eziga ike na eriri magnetik, ọ na-eme ka njide dị n'èzí dọba na kọmpụta, na-emechi ihe ndọba ahụ ma na-etinye compressor.N'ihi na ac clutch na-ejikọta ya na oghere compressor, ọ bụrụ na ọ na-apụ apụ, ọ gaghị emegharị ụgbọ ala ac compressor shaft.Nzọụkwụ ole na ole ga-enyere gị aka dozie nsogbu a.
Wepu eriri ikuku ụgbọ ala na-eji mgbanaka nha kwesịrị ekwesị na ihe mgbanaka gị.Kwupu njikọ dị na eriri igwe magnetik gị.Jiri oghere nha kwesịrị ekwesị wepụ bolt 6 mm n'etiti etiti AC clutch.
Wepụ njide ahụ, ma lelee oghere dị n'ogwe n'azụ ya.A na-eji ha emepe oghere nke ọma, yabụ debe ha n'ebe dị mma ka ị ghara ịla n'iyi.Wepu mgbanaka ọnyà dị n'ogwe nke na-echekwa ihe ndọba ahụ, ma wepụ nke a na ogwe osisi ahụ.
Hichaa osisi na akụkụ ndị ọzọ nke ọma tupu echichi.Fanye ihe ndọtị ọhụrụ ahụ, ma tinye mgbanaka snap-eji na ihu nke gbapụrụ agbagọ chere ihu n'èzí.
Wụnye otu spacer na shaft compressor, wee wụnye njide, ma kechie bolt 6 mm nke ọma.
Debe ihe nleba anya n'etiti njigide na pọley ahụ iji hụ na mkpochapụ kwesịrị ekwesị.Ọ bụrụ na mkpochapụ ahụ ezighi ezi, wepụ efere ipigide ma tinye oghere ọzọ.
Lelee oghere ikuku ka ijide n'aka na njigide ga-arụ ọrụ nke ọma.Ọ bụrụ na oghere ikuku na/ma ọ bụ mkpochapụ ezighi ezi, njigide gị nwere ike ịka nká ngwa ngwa.Jikọọ njikọ na eriri eletriki eletrik.
Nke kacha mmavalvụ njikwabụ ngwaahịa ọhụrụ dabara na OEM & ahịa ire ere, a na-ebutekwa ngwa ya na ụlọ ọrụ ndị agha.Emepụtara ngwaahịa a & ndị otu R&D nwere onwe anyị.Usoro ahụ na-anabata eserese njikwa SPC & usoro “nyocha ise” maka njikwa & njikwa mma.Asambodo nnabata bụ “nrụrụ efu”.Ndị otu R & D anyị nwere ahụmịhe bara ụba na-arụsi ọrụ ike na-emepe emepe & na-emepe emepe site n'oge ruo n'oge.Ngwaahịa ahụ emeriela ọtụtụ ikike imepụta ihe na ọkwa steeti wee gafee nyocha TUV Germany.N'ihi ụdị zuru oke, ịdị mma kwụsiri ike, akụrụngwa zuru oke & ọnụ ahịa dị ọnụ ala, ọ nwere ike gboo ọtụtụ ihe ndị ahịa chọrọ.
Ọtụtụ sistemụ ntụ oyi ọhụrụ na ọtụtụ ụgbọ ala okomoko ọhụrụ na-eji compressors enweghị njigidecompressor akara valves.Compressors enweghị clutchless na-eji thermistors, sensọ, na solenoids na-arụ ọrụ eletrọnịkị na-arụ otu ọrụ dị ka njigide elektrọnịk n'ụzọ igwe.
Ọrụ nke valvụ ahụ bụ iji dozie nrụgide nke mmiri na-asọba na usoro site na ịchịkwa akụkụ nke swashplate.Nke a na-edobe evaporator na okpomọkụ na-adị ntakịrị karịa ebe na-ajụ oyi iji bulie ọsọ ọsọ nke sistemu ntụ oyi ụgbọ ala.
Agbanyeghịn'ibu akara valveska na-arụ ọrụ na ndị okenye na ndị ọzọ echekwa ụgbọala n'ihi na ndị ọzọ na-eri, akara nso nkeeletrọnịkị akara valvesdị nnọọ elu.Igwe njikwa eletrọnịkị na-arụ ọrụ nke ọma ma na-ebelata nchụpụ, na-ebelata iyi nke sistemu AC, na-ebelata ibu engine n'oge ọrụ, ma na-emepụta ihe ndị dị ọcha.N'ikpeazụ, ụdị ndị dị oké ọnụ ahịa na-akwụ ụgwọ karịa oge ndụ ma ọ bụ ụgbọ ala.
Ebe ọ bụ navalvụ njikwa compressorbụ eletrọnịkị, ọ dị mkpa ijikọ naanị ule nyocha ahụ na ngwa nyocha nyocha.N'ime nkeji ole na ole, ị nwere ike ikpebi ma akụrụngwa compressor ikuku gị na-arụ ọrụ nke ọma.
valvụ njikwa igwe
Achọrọ ikuku oyi dị elu
N'ime oge nke ọkara na nnukwu achọrọ A / C, nrụgide mmịpụta sistem ga-adị ukwuu karịa ebe ntọala valvụ njikwa.N'ime oge ndị a, ndịvalvụ njikwana-edobe ikuku ọbara site na crankcase ruo n'ọdụ ụgbọ mmiri.Ya mere, nrụgide crankcase dị ka nrụgide mmiri ara.The akụkụ nke wobble efere, otú compressor Ntugharị bụ na ya kacha.
Achọrọ ntụ oyi dị ala
N'ime oge achọrọ A / C dị ala ruo ọkara, nrụgide mmịnye sistem ga-adaba na ebe edobere valvụ njikwa.Achịcha njikwa na-eme ka ikpochapu si na crankcase na-egbochi ikpochapu site na crankcase na oriri.Nkuku nke efere wobble na ya mere a na-ebelata ma ọ bụ na-ebelata mkpakọ compressor.N'ime oge ndị a, nchụpụ a na-adịgasị iche n'enweghị nkwụsị n'etiti ihe dịka 5% na 100% nke nchụpụ ya kacha.
(Ọdabara naanị maka compressors mgbanwe mgbanwe)
1. A na-egbochi valvụ ahụ site na adịghị ọcha (ihe mgbapụta ahụ dị mfe ifriizi)
2. Ntọala na-ezighị ezi nke valvụ na-edozi mmiri
1. Naghachi refrigerant si usoro ntụ oyi.
2. Dochie valvụ na-agbanwe agbanwe nke dị na mkpuchi azụ nke compressor.
3. Kwe ka mgbapụta mgbapụta na-agba ọsọ ma ọ dịkarịa ala 15 nkeji iji kpochapụ gas na mmiri na-adịghị na ya site na usoro ntụ oyi.
4. Weghachite ego nke refrigerant na mmanụ a na-enweta na refrigerant na usoro.